Story,Romance(प्रेम-कथा), WRITING NEPAL — Books, Writings, Authors, Publisher, Writers and Blogger - All in One Place. — Just Write !
Home > Romance(प्रेम-कथा) > Story
Rated 3.93/5 (From 520 user)
kanchan Sharma 16th Apr 2016 Romance(प्रेम-कथा)0comments Like ( 0) 12361 reads
1 followers |0followings |2articles
“तिम्रो छोरीलाई चै म नसक्ने भंए, सुतिमात्ररहन्छे, भनेको केहि सुन्दीन, एउटा केटो खोजेर पठाईदिइहाल” बेलुकाको खाना खानलाग्दा आंमाले टोकसेपछि अब के चाहियो, सानि जुरुक्क उठेर खानाको थाल बाख्राको मुखैनेर लगेर छाडिदिई र कोठाको ढोका यस्तरी लगाईकी सानो तिनो गोलीनै पडकेको जस्तो ।
“देख्यौ हैन यस्को ताल रु तिमी चुईक्ककेही बोल्दैनौ, सधैको छुच्ची म मात्रै, कस्तो कर्म प्रभु मेरो” सानीकी आमा कराईरहिन, सानीका बा पनि खाना नसकिकन् उठे र गांउ तिर डुल्न निस्के ।
जुन देखि माथ्लो घरे कप्तान बाको कान्छोछोरा सुरेसले घरमा दुलही भित्र्यायो हो त्यही दिन देखि सानीले खाना खान, केहिकाम गर्नछाडी र केही काम गर्नू भन्यो भने झर्किन्थ्यी, ओछयानमा नै घोप्टोपरेर सुतिरहन्थी ।
धेरै पर पुग्नै पर्दैन, छ महिना पनि भएको छैन, सानिमा यस्तो परिवर्तन भएको । बिहानै सुर्योदय पुर्बनै उठी पंधेराबाट पानी ल्याउने, गाईबस्तुलाई कुडो पकाएर ख्वाउने, कहिलेकाही त आंमा उठनेबेलामा दैलोपोत्नपनि भ्याईसक्थी । कहिले नि पढ भन्नु परेन, त्यहि आंमानै हो मेरी छोरी त बिजुली हो भन्दै सुनाउदै हिडदथी । स्कुलमा पनि सरहरुको प्रिय शिष्य थिई । तर एकाएक के भयो सानी सन्चो नभएको बहानामा स्कुलजान छाडी । अनेक धांमी झांक्रि लगाउदापनी केही फाईदा भएन । परिक्षा पनि बिगारेपछी सबैजना आजित भए सानी सगं तर रोग चै पत्तालागेन ।
“सानी ला यो चुरा तेरोलागी हांटबाट ल्याईदिएको, कसैलाई नभन्नुनी मैले दिएको भनेर” सुरेसले बाख्रा चराउने बेलामा खुसुक्क पोको दियो । सानी खुसी भई कतिखेर घरगएर लगाएरहेर्ने मन भो । घर फर्कदा कुलोनेर यस्तरी चिप्लीईकी हातको चुराकोपोको ढुगांमा बज्रेर चक्नाचुर भयो । लडदाखेरी आंमा भनेर चिच्याएकी त सपनामा पो लडकी रहीछ तर बिपनामा पनि आंमा भनेर आवाज गरी । आंमा आत्तिदै कोठमा आईन, सानीको जिउ पसिनाले निथ्रुक्क भएर भिजेकिथिई, टाउको छाम्दाखरी निस्लोट जरो आएको थियो । आंमा र बा मिलेर रातभर पानीपट्टी लगाइदिएर रात कटाए । सानि बिस्तारै निको त भई तर मनको घाउ कसैले निको पार्न कसैले सकेनन् ।
त्यसैको दुईहप्ता पछि फेरी भेटभयो हाटबजारमा सानीको र सुरेसको, सानी एक्लै थिइ, घरायसीसामान किनमेल गर्न । सुरेससाथीहरु संग आएको थियो । दुबैको नजर सांटासाट भयो । सानीलाई सुरेस आएर बोलोस जस्तो भएको थियो । सुरेसले नजिकै आएर कसैले नदेख्ने गरी कागजको टुक्रा हातमा थमाईदियो । सानिले हेरी । म स्कुल पछाडी तलाई कुरीरहेकोहुन्छु आइज है । त्यतीमात्र लेखेछ । किनमेल सकेर सानी स्कुलतर्फ लागी । सानी त्यांहा पुग्नासाथ सुरेसले अंगालोमा बेयो र रुन लाग्यो । सानीलेपनी सायद त्यही चाहन्थी, अंगालोबाट छुटन मनगरिन् । आजफेरी पुरानैदिन फर्केको जस्तो भएको थियो । “बा ले मलाई शहरां पठाउने रे त बिना म बाच्न सक्दीन” । “ म पनि तिमी बिना बाच्न सक्दीन सुरु (सुरेसको मायाले बोलाउने नाम)” । दुबैजाना सुक्क–सुक्क गर्नलागे ।
काका आएछन सुरेसलाई लिन शहरबाट, घरमा सल्लाहहुदैथियो, सुरेसको स्वास्नीपनी संगै जानेभई । यस्तो गर्दा नयां जोडीको छुट्टिनु पर्दैनथ्यो र शहरमा घरव्यवहारको काममा पनि सहयोग हुन्थ्यो ।
दुई तिन घन्टा बित्दापनी सुरेस घर नफर्केपछि सबैको शंका बिस्वासमा परिवर्तन भयो । कसैले पनि देखेको कुरा गरेनन् । भोली पल्ट बिहानै तल माझीको छोरो हस्याङ्ग फस्याङ्ग गरेर कप्तान बाको घरमा आएर नदिको तिरमा लुगा, चप्पल र केहिलेखेको कागजको टुक्रो देखेको बतायो । सबै तेतै तिर लागे सुरेश र सानीको लुगारहेछ । कप्तान बा कि बुहारी मुर्छा परी, कागजमा लेखिएको थियो हामीलाई माफ गरिदीनुहोला अलबिदा । अलिपर ढुङ्गामा सानीको रातो च्यादर अडकिरहेको थियो । माझिहरुले र गांउले मीलेर दिनभर नदिमा खोजे तर भेटेनन् ।
बर्षदिन बित्यो अब सबैजनाले चित्त बुझाउदैथिय । त्यही बर्ष कप्तानबा पेन्शन थापेर दिल्लीबाट फर्कदा जांदा त्यस्तै चार–पांच स्टेशनकटे पछि सानो चिया पसलमा चिया पकाईरहेको आफ्नो छोरो सुरेस, सानी र सानो बच्चो पनी देखे । मन ढक्क फुल्यो । रेलपनि कुदिहाल्यो । तर आजसम्म कप्तान बा ले यो कुरा कसैलाई किन भनेकाछैनन् रहस्यमै छ ।
कंचन शर्मा २०७३